Guillermo Galván: «Ọ bụ ọrụ dịịrị onye edemede ọ bụla ịchọ olu nke aka ha» | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Guillermo Galván: "Ọ bụ ọrụ dịịrị onye edemede ọ bụla ịchọ olu nke ya"
Foto. Guillermo Galván Twitter profaịlụ.
Guillermo Galvan Ọ bụ onye edemede na odeakụkọ. Amụrụ na Valencia, lara ezumike nká na nta akụkọ, na-eme omume ọtụtụ afọ na Cadena SER, ọ tinyela onwe ya kpamkpam na akwụkwọ kemgbe 2005. Ọ na-edebanye aha aha ndị dị ka Kpọọ m Judas ma ọ bụ Anya nke Saturn, n'etiti ndị ọzọ, na na 2019 the saga na nyocha onye nyocha Carlos lombardi con Mowing oge ma wepụta na mmiri Nwa agbọghọ nke Ọkpụkpụ.
Enwere m ekele maka obiọma na ọgwụgwọ gị, na mgbakwunye na oge ya maka ajụjụ ọnụ a ebe ọ na-agwa anyị ntakịrị ihe niile. Site na ha mbu ogugu, ndi ode akwukwo ọkacha mmasị ọbụna kedu ka ị si hụ pelekọta mmadụ na nchịkọta akụkọ gburugburu.
Ajụjụ Ọnụ na GUILLERMO GALVÁN
GUILLERMO GALVÁN: Ọgụgụ mbụ m, ka anyị kwuo okwu siri ike, bụ Glasgow na Charleston, otu n'ime akwụkwọ akụkọ pere mpe nke Verne, nke e bipụtara n'asụsụ Spanish n'okpuru aha nke Manye mgbochi ahụ. Aka m debere nnomi ahụ dị ka ọla edo na akwa, n'ihi na Enwetara m ya na asọmpi mgbe m dị afọ asatọ; Enwere m ndị ọzọ, mana nke ahụ, dabara nke ọma, ana m edebe ya. Kedu onye edemede, ihe mbu m mere bu ndị na-atọ ọchị, akụkọ ụmụaka nke ọ rụrụ ọrụ nke onye edemede na onye na-ese ihe nkiri.
Na mpaghara akụkọ, ide omume na echefuru m oge m nwere ohere ikpochapu ha, nihi na agum akwukwo n’edemede bu ihe ojoo karia igwu egwu. M ga-esi na uto dị elu iji chọta obi ụtọ n'eziokwu ahụ gụọ ma dee, na n'oge ahụ m nwetara ihe nkiri, na ọrụ - nke na-ezughị ezu - nke a pụrụ ịkọwa taa, jiri mmesapụ aka dị ukwuu, dị ka ndị dị adị ma ọ bụ na-enweghị isi. O nweghizi etu esi ahụ ha.
NG: Ihe kacha mkpa na ndụ gị bụ ndị ị natara n'ime nwata. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụ otú ahụ ka ọ dị n'ọnọdụ m, n'echiche ahụ, enweghị m ike ịdabere na naanị otu ọrụ. Aga m ekwuputa otutu Hesse, Kafka, Baroja, Unamuno ma ọ bụ Dostoevsky. Maka ịbụ otu n'ime ndị mbụ, enwere ike Steppe wolf nke Hesse. N'ihi gịnị? N'ezie n'ihi na n'oge ahụ Achọpụtara m na onye na-agbagha agbagha tupu ụwa, na n'ihi na ụzọ nke na-agwa ya rafuru m.
AL: Onye edemede kachasị amasị gị ma ọ bụ onye metụtara ọrụ gị karịsịa? Nwere ike ịhọrọ karịa otu na site na oge niile.
GG: Enwere m mmasị n’ebe ọtụtụ ndị edemede nọ, ọ bụ ezie na m na-agbalị ịghara imetụta m. Ekwenyere m na ọ bụ ọrụ dịịrị onye edemede ọ bụla ịchọ olu nke aka ya, na - emetụta ya ma ọ bụ na ọ maghị. Nke ahụ kwuru, ma hapụ ndị ochie na pipeline: Galdós, Baroja, Marsé, Grandes, Landero, Padura, Dostoevski, Auster, McEwan, Coe...
GG: Onye nzaghachi nwere ike ambivalent. Knowingmara pụtara ịbanye na atụmatụ nke akwụkwọ akụkọ dịka otu agwa, nke abụọ na ọgụgụ isi, iji mepụta kọntaktị onwe onye na onye isi. Egwuregwu na-akpali akpali na nke edemede. Hụ ya otu a, Ọ ga-amasị m nkata na Raskolnikov, protagonist nke Mpụ na Ahụhụ. Na-etinye aka mepụta, ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ifo: Don Quixote.
NG: Obi iru ala, dị ka o kwere mee. Dị ka onye na-agụ ihe Enwere m ikike maka abstraction na m nwere ike ime ya na-eme mkpọtụ ndabere. More maniac, ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọ ya nke ahụ, abụ m na ide ihe. Iji malite, achọrọ m ma ọ dịkarịa ala di na nwunye n'ihu enweghị nkwụsị, ọ bụrụ na m na-etinye aka na usoro ide akwụkwọ ma ọ bụ na-emikpu onwe m na akwụkwọ. para detuo ederede oge obula na ọnọdụ dị mma, na mgbe ụfọdụ ndetu ndị ahụ na-ekpebi dị ka ihe m dere n'oge awa m dị jụụ.
NG: Na "mousetrap" m, nke bụ otú m si akpọ ụlọ ahụ ebe m na-ede ihe, enwere m obi iru ala, ọ bụ ezie na m nwere ike ime ya ebe ọ bụla na-ezute ọnọdụ ndị a dị n'elu. Na omenala Abịala m ikwiikwii n'abalị, na n’oge nke abalị ahụ, a mụrụ ọtụtụ akwụkwọ akụkọ m. Na afọ, na karịsịa na ezumike nká m dị ka odeakụkọ, Enwere m mmasị na ụtụtụ. Ya mere anyị nwere ike ikwu nke ahụ oge obula di nma na-arụ ọrụ ọ bụrụ n’onwere ime ya.
NG: Akwụkwọ ndị dị mma na-amasị m, n'agbanyeghị ụdị dị iche iche. N'ime ndị a, akwụkwọ akụkọ na akụkọ ntolite, ọ bụ ezie na anaghị m eleda ihe ọma echiche efu ma ọ bụ akụkọ sayensị. Dị ka nlezianya nke akwụkwọ, agụkwara m nwalee, karịsịa akụkọ ihe mere eme-agụmakwụkwọ.
GG: Emechara m Ncheta ndụ, na autobiography nke Juan Eduardo Zúñiga, ọ bụ ezie na nzụlite m na-agụ site na nga bụ Mba ngosipụta nke Galdós; Agụọla m ọtụtụ, nke kachasị ama, mana ịgụ ha site na mmalite ruo na njedebe na-enye ịkọwa mmekọrịta yana ọ bụ ihe ịma aka na-egosi ihe obi uto. Banyere ide ihe, agabu m n'ihu nke anọ site na saga nke Carlos lombardi, nke m nwere olile anya gwụchaa na njedebe nke afọ ma ọ bụ na mbido ọzọ
NG: Siri ike, ọ bụrụ na ị nwaa site na omenala ụzọ, ma ọnụ ọgụgụ nke ndị edemede ma ọnọdụ ma ọ bụ ọdịmma nke ngalaba mbipụta akwụkwọ. Agbanyeghị, oge ọ bụla enyere ha ohere desktọọpụ ndị ọzọ site na nyiwe ụfọdụ, nyiwe nke, n'ụzọ dị iche, na-eji nnukwu uru na ụlọ ahịa akwụkwọ na-etinye ndụ ha n'ihe egwu.
Anyị na-ebi oge nke nnukwu mgbanwe n'ọhịa ahụ, na ihe mgbaasị na-adabere na onye ị jụrụ. Ọ ga-abụ mgbanwe mma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị na-agụ ya na-abawanye na, na nkenke, bụ ndị na-ejide osisi nke onyinyo. Ana m ekwu maka ndị na-agụ nwoke maka na ndị nwanyị na-agụ akwụkwọ, dabara nke ọma, ọ dị ka ha na-eto kwa ụbọchị.
AL: Ọ bụ oge nsogbu anyị na-enwe na-esiri gị ike ma ọ bụ ị nwere ike ịnọnyere ihe dị mma n'onwe gị na akwụkwọ akụkọ n'ọdịnihu?
GG: Ewezuga ụfọdụ ndị na-egbu mmadụ site n'ọrịa a, nsogbu nke ịdị ukwuu a adịtụghị mma. Site na echiche nke onwe, ọ dabara nke ọma, enwebeghị m ọghọm, mana ọkachamara metụtara ya akwụkwọ m Nwa agbọghọ nke Ọkpụkpụ, nke abụọ nke Lombardi saga, nke ka hapụrụ mgbe ala mkpu. Nkwụsịtụ na nkwalite ya na ugbu a, site na njiko na mmalite, anyị na-anwa imeri. Ọ ga-abụ ihe na-ezighi ezi ma ọ bụrụ na m ewere ya dị ka mmejọ nke akara aka, n'ihi na otu ihe ọghọm a tara ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ, ndị edemede na ndị edemede.
Na nke ha nchịkọta akụkọ a manyere ha ime otú ahụ igbu oge na atụmatụ gị n’ime opekata mpe otu ọnwa; ụfọdụ, ndị kasị dị obi umeala, abụwo ọ fọrọ nke nta na-egbu ọnya. Nke a apụtaghị ọtụtụ ngalaba mmekọrịta ndị ọzọ. Ya mere maka ugbu a ọ dịghị ihe dị mma Enwere m ike ịhụ na afọ a 2020. Eleghị anya, n'ihi na abụghị m Boccaccio ma ọ bụ Camus.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Guillermo Galván: "Ọ bụ ọrụ dịịrị onye edemede ọ bụla ịchọ olu nke ya"
Uru nke ịbụ onye a jụrụ ajụ